merolagani - नेपाल एसबिआई बैंकको आम्दानी घटेपछि खुद नाफा ४८ प्रतिशले घट्यो
नेपाल एसबिआई बैंकको आम्दानी घटेपछि खुद नाफा ४८ प्रतिशले घट्यो
Jan 31, 2021 09:03 AM Merolagani
नेपाल एसबिआई बैंक (SBI) ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा खुद मुनाफा घटेको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। यस अवधिमा बैंकको खुद मुनाफा ४८.५५ प्रतिशत अर्थात ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँले घटेर ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको हो।
बैंकले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको थियो।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा घटेपछि खुद नाफा प्रभावित भएको हो ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ घटेर एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा बैंकको खुद व्याज आम्दानी २ अर्ब १० करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
त्यसैगरी, बैंकको सञ्चालन मुनाफा पनि समीक्षा अवधिमा ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ घटेर ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा बैंकको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो।
खुद नाफासँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २३ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको बैंकको यस्तो आम्दानी चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा घटेर ११ रुपैयाँ ५० पैसामा सीमित भएको छ।
चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ९५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको यस बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र रिटेन्ड अर्निङ्गमा १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ। यस्तै बैंककाे वितरण याेग्य मुनाफा भने १४ कराेड ११ लाख रूपैयाँ रहेकाे छ।
यस अवधिमा बैंकले १ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ८८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ।
यस अवधिसम्ममा बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १७१ रुपैयाँ ६७ पैसा, मूल्य आम्दानी अनुपात ४०.५३ गुणा र बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ०.१९ प्रतिशत हरको छ।
भर्खरै आईपीओ निष्काशन गरेका नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले प्रकाशित गर्यो वित्तीय विवरण, वित्तीय अवस्था कस्तो?
Feb 04, 2021 09:04 AM
दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको औषत नाफा १ अर्ब बढी, कुन सूचकमा कुन बैंक अगाडि?
Feb 02, 2021 08:21 AM
दोस्रो त्रैमासमा २.२६ प्रतिशतले घट्यो बैंकिङ्ग सेक्टरको नाफा, ४ बैंककाे वितरणयाेग्य नाफा भने १ अर्ब माथि,
Jan 28, 2021 04:42 PM
मेगा बैंकको आम्दानीसंगै खुद नाफा ३७ प्रतिशतले बढ्यो
Jan 28, 2021 02:34 PM
सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको खुद नाफा २८.२५ प्रतिशतले घट्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
Jan 28, 2021 01:29 PM
व्यवसाय खुम्चिएसँगै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा घट्यो
Jan 28, 2021 10:23 AM
मर्जरमा गएका कम्पनीको कर लिएको लगानीकर्ताको आरोप, सिडिएससि भन्छ- कर लाग्दैन, ब्रोकरलाई भन्नुहाेस्
मर्जरमा गएका कम्पनीको समेत कर तिर्नु परेको भन्दै लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन्। तर त्यस्ता कम्पनीको कर नलाग्ने भन्दै सिडिएससिले स्पष्टीकरण दिएको छ।
महालक्ष्मीको नाफालाई गैर सञ्चालन आम्दानीको टेवा
Apr 20, 2021 09:58 AM
एक अर्ब नाघ्यो मुक्तिनाथको खुद नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति?
Apr 20, 2021 08:53 AM
गरिमाकाे खुद नाफासँगै बढ्यो प्रतिशेयर आम्दानी, वितरणयोग्य मुनाफा कति?
Apr 20, 2021 08:08 AM
सिटिजन्स बैंकको खुद नाफा साढे ४१ प्रतिशत बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि सुधार
Apr 20, 2021 06:37 AM